Brezila: Tantaran’Ilay Mpifindra Monina Syriana 93 Taona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Marsa 2012 9:01 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, Español, Português, Aymara, عربي, русский, Ελληνικά, English
Teraka tany Hwash tanàna ambanivohitra any amin'ny faritra andrefan'i Syria any amin'ny faritanin'i Homs i ‘Sito Badia’, ‘Bebe Badia’ amin'ny teny Arabo – araka ny ilazan'ny zafikeliny azy. Nifindra tany Brezila niaraka tamin'ny fianakaviany izy 80 taona lasa izay, fony fao 13 taona monja izy. Ity tantara manaraka ity no mampahatsiahy ny fifindramonin'i Arabo anisan'ny voalohany tany Brezila sy Amerika Latina.
Ny taona 1932, nanapa-kevitra ny honina any Brezila ny rain'i Badia antsoina hoe Habib rehefa nifindra nankany São Carlos, any amin'ny fanjakan'i São Paulo ireo zokiny lahy:
Tany Arzantina ny raibeko Farah sy ny rahalahin-draiko vao 10 sy 12 taona monja tamin'izany. Rehefa reny fa nifindra nakao São Carlos, Brezila, ny rahalahiny, dia nanapa-kevitra izy ny hametraka ny zanany tany dia nody tany Syria izy mandra-pahafatiny. Nandeha irery nankany Brezila ny raiko hijery ny rahalahiny; nipetraka tany herintaona izy ary dia nody tany Syria. Nampitaha ny fiainany tany Brezila sy Syria izy ka nanapa-kevitra ny honina any Brezila ka niangavy anay hiaraka aminy.Niaraka tamin'ny reniko sy ny iray tampo amiko Michael 11 taona sy Adib 9 taona, raha nandao ny seranan'i Beirota tany Libanona ka hitodi-doha ho any amin'ny seranan'i Santos, niandriaka nandritra ny 40 andro nankany Brezila. Tsy nahazaka ny dia aho; niantsona tao Genoa Italia izay ahatsiarovako ny tsitokotokom-pasana aho, ary nihazona anay dimy andro tao an-tsambo ry zareo tao Marseille, Frantsa.
Niandry ny fahatongavan'ny fianakaviana ny zana-drahalahy tao São Carlos, toerana nanofan'ny rain'i Sito Badia trano. Nanampy ny reniny tamin'ny fitaizana ny iray tampo aminy izy, tsy mba nankany an-tsekoly (tsy mahay manoratra izy), saingy tsaroany koa ny hira taloha tahaka ny عتابا ودلعونا (Ataba & Delona) sy Dabke avy ao Syria, izay tiany hiraina ho an-dreniny:
Tantsaha izahay nandritra ny fito taona, tsotra izahay fa niaina tsara; fa ankehitriny koa efa moderina izahay ary mbola miaina tsara kokoa. Tia nihomehy aho ka nolazain'ny reniko ho ankizivavy maditra.
Mitovitovy ny tantaran'ny ankamaroan'ny Syriana nifindra monina ho any Brezila – miara-mipetraka amin'ny havana dia manokatra fandraharahana manokana. Araka ny antontanisa tamin'ny 1962, ny 9% n'ny tompon'orinasa tao São Paulo [.pdf] dia Syriana sy Libaney.
Nanomboka nivarotra akanjo ny raiko, nanokatra fivarotana tao Descalvado avy eo, izay nanampian'i Michael Shamas, Libaney, anay sy Badi faralahy aminay. Taona vitsivitsy taty aorana nisy namanay iray niteny fa hisy tanàna vaovao hatsangana antsoina hoe Novo Horizonte. Nanambady an'i Mossa havakavanay Syriana aho rehefa 28 taona.
Nanan-janava efa-bavy i Sito Badia, valo ny isan'ny zafikeliny ary ho avy afaka roa volana ny zafiafiny voalohany Gabriel. Raha isaina ny fianakavian'ny rahalahy sy ny zana-drahalahin-drainy dia mahatratra 90 ny mpikambana ao aminy. Misy fivoriam-pianakaviana fanao isaky ny krismasy hampisehoana ny taranaka vaovao sy hamelomana ny fiaviana Arabo.
Mbola mifandray akaiky amin'ny havana na ao Brezila na any Syria amin'ny alalan'ireo zanany vavy i Sito Badia: Maria, Najat, Marta and Esmeralda (efa maty); soa fa nisy azy ka mbola tsy very ny teny arabo ao amin'ny fianakaviana:
Ny rahalahiko Michael, ny zanaky ny rahalahin-draiko Elias sy Jamelihe sisa no miteny Arabo Syriana ao amin'ny fianakaviana. Ny hany hain'ny fianakaviana dia ny anaran'ny sakafo amin'ny teny Syriana [sady mihomehy izy]. In-telo nitsidika an'i Syria aho, fa efa sarotra ny mandray voromby ankehitriny. Mifampiresaka an-telefonina izahay isaky ny Krismasy sy ny Paska. Farany teo nitsidika an'i Syria i Marta sy i Najat tamin'ny 2009 raha nanambady Syriana ny zafikeliko vavy voalohany
Monina ao Novo Horizonte, São Paulo ankehitriny i Badia izay iomanany hankalazana ny fahazato taonany raha afaka fito taona.
hafatra nivoaka voalohany tao amin'ny blaogin'i Rami Alhames.